धुर्मुस–सुन्तलीको खातामा कति पैसा छ ?: प्रधानमन्त्री – Todaypokhara
१६ माघ २०७५, बुधबार १३:४७ 30/01/2019
धुर्मुस–सुन्तलीको खातामा कति पैसा छ ?: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ कामको थालनी गर्ने संकल्प गरेको भन्दै धुर्मुस सुन्तलीको प्रशंसा गरेका छन् । कलाकार जोडी सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुुन्तली’को फाउन्डेसनले भरतपुरमा अन्तराष्ट्रिय रंगशाला बनाउने घोषणा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दुबैको प्रशंसा गरेका हुन् ।
‘बजेट निकै ठूलो छ । पैसा छैन तै पनि आँट गर्यो । आँट गरेर नगरपालिकासँग सम्झौतै गर्यो’ उनले भने, ‘नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने संकल्प गरेकोमा खुुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
बैंक खातामा पैसा भए पनि नभए पनि रंगशाला बनाउने र त्यसमा सहयोग गर्ने आँट देखाएको भन्दै उनले प्रशंसा गरेका छन् । उनले सहयोग गर्छु भन्नेहरुलाई रकममै बाचाअनुसार रकम उपलब्ध गराउन आग्रहसमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको संबोधन
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला बनाउने आँट गर्यो । आँट कसरी गर्योे ? बजेट निकै ठूलो छ । पैसा साथमा छैन । तै पनि आँट गर्यो । आँट गरेर नगरपालिकासँग सम्झौता नै गर्योे । हामीलाई एउटा परिकल्पना पनि प्रदर्शन गरेको छ ।
म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने संकल्प गरेका छौं । त्यसका लागि केही आधारभूत कुरा तय भयो । स्थान तय भयो । कस्तो बनाउने भन्ने नक्साङ्कन पनि भयो । त्यसका निम्ति लगभग ४ करोड यहीँ उठ्यो होला ।
तर, अँझै २९६ करोड बाँकी छ । त्यसकारण मेरो सुझाव छ, लेख्ने कुरामा अझ जाँगर चलाउँ, लेखेको रकम भुक्तानी गर्न विलम्ब नगरौं । कहिले कहिले विलम्ब हुन्छ । म आफू पवित्र र राम्रो कामका लागि सहयोगी भूमिका खेल्न सँधै तत्पर छु ।
क्रिकेट हाम्रा लागि अलिक नयाँ खेल हो । धेरै नयाँ पनि होइन । यसको अर्को रुप हामीसँग थियो । यस रुपमा अलि पछि आयो । नेपालमा आफ्नै ढंगका परम्परागत खेलकुदहरु छन् । कहीँ दौड, कहीँ कुस्ती, कहीँ छेलो फ्याक्ने आदि । खेल र राजनीतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । दौडेर गएर राजा हुने चलन थियो । जो दौडमा फस्ट हुन्छ, उही राजा हुने थियो । कस्तो सम्बन्ध होला ?
हाम्रा पूर्वजहरु तीर्थयात्रा गर्थे । त्यसबेला हवाइजहाज थिएन । हिँडेर जानुपर्थ्यो । बहुत टाढाटाढाका तीर्थयात्रा गरेर फर्किन्थे । हाम्रो अभ्यास शारीरिक तन्दुरुस्तीमा हामी अरुभन्दा कम हुनुपर्ने कारण छैन । मैले भन्ने गरेको छु, मानसिक हिसाबले, बौद्धिक हिसाबले दुनियाँमा अन्धकार हुँदा यहाँ ज्ञानको उज्यालो थियो । शास्त्र, संगीत, साहित्य, कला यहाँ तयार भयो र फैलिदै गयो । त्यस्ता पुर्खाका हामी सन्तान, कुनै हिसाबमा कमी हुनुपर्ने अवस्था छैन । तर, दुर्भाग्य विगतका विभिन्न ऐतिहासिक कारणले हामी पछाडि पर्यौं ।
अहिले नेपाल अगाडि बढ्न खोजेको छ, त्यसको वातावरण बनेको छ । मैले अन्तर्रा्ष्टिय मञ्चहरुमा गएर भनेको छु, नेपाल एउटा नमूना देश हो । नेपाली जनताले चिताएका कुरा प्राप्त गरेर छोडेको छ । राणाशासन फाल्छु भन्यो, फाल्यो । पछिल्लो समयमा फेरि अधिकार खोसिए । त्यसलाई फिर्ता ल्याइयो । शरणार्थी समस्याको झमेलामा पर्यौं । त्यो समाधान भयो । द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरियो । अहिले स्थायी सरकारका साथ नेपाल सुशासन र विकासमा अगाडि बढेको छ, अगाडि बढ्छ ।
मैले घोषणा गरेको थिएँ जाडोले कठ्यांग्रिएर कोही मर्नुपर्दैन भनेर । अहिले शीतलहरको समय सिद्धियो, कोही मरेनन् । किनकी समयमै कम्बल र्पुयाइएको छ, दाउरा र्पुयाइएको छ । काठमाडौंमा बसेर घरबाट फुत्त निस्केर कफी सपमा ठूला कुरा गर्नु बेग्लै कुरा । हिमालका कुनाकुनामा, तराइका छाप्राछाप्रामा कम्बल र्पुयाइएको छ ।
मैले भनेको छु, विद्यालय जानबाट कुनै बालबालिका वञ्चित हुनु पर्दैन । हामी विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयबाहिर रहन दिँदैनौं । मैले नयाँ युगको सुरुवात भनेको कतिलाई मन परेन । बालबालिका स्कुल जान नपाउने युगको अन्त्य हुनु भनेको नयाँ युगको सुरुवात हो कि होइन ? अझै केही बालबालिका विद्यालय र्पुयाउन बाँकी छ । उनीहरुलाई आगामी वर्ष र्पुयाउँछौं । नेपालमा साक्षरताको ठोस अभियान अगाडि बढाएका छौं । अब नेपाल निरक्षर रहन सक्दैन । बेरोजगारलाई रोजगारी, त्यो नभए बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरेका छौं । यो कुरा कतिले सुनेका छन् कतिले छैन ।
अस्ति डावोसमा मैले जी–२० को वैठकमा भाग लिने मौका पाएँ । नेपालले त्यस्तो वैठकमा पहिलोपटक भाग लिएको हो । दुःखको कुरा अल्पविकसित देशको म एकजना मात्रै परेछु । सबै विकसित देशका । मैले त्यहाँ कबुल गरेर आएको छु, अब धेरै वर्षसम्म हामी ‘एलडीसी’ भएर बस्नेछैनौं ।
हामीसँग युवा जनशक्ति छ, प्राकृतिक स्रोत–साधन छ । हामी अनेक कुराले अनुकुल अवस्थामा छौं । स्पष्ट नीति छ । स्थिर सरकार छ । अब लरबर गर्ने पक्षमा छैनौं । कतिपयले मलाई प्यानल डिस्कसनमा सोधेका पनि थिए, लोकतन्त्र खुम्चियो भन्छन् के हो भनेर ? मैले ‘कुप्रचारको प्रभाव यहाँसम्म आइपुगेछ’ भनेँ । कहाँनेर खुम्चियो नेपालमा लोकतन्त्र ? नेपालमा लोकतन्त्र खुम्चिदैन, खुम्चिन दिइँदैन ।
मभन्दा अगाडि मदनकृष्ण (श्रेष्ठ) जीले भाषण गर्दा खुब ताली लाग्यो भनेको सुनेँ । पक्कै पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नुभयो होला । बोल्नैपर्छ । हामी दुवैजना भ्रष्टाचारविरुद्ध छौं । म सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचारलाई ठेगान लाउने समेत काम गर्छु । भ्रष्टाचार हुन दिँइदैन । भ्रष्टाचारीमाथि धमाधाम कारवाही भइरहेको छ ।
मदनकृष्णजीको भाषणमाथि थप्छु । उहाँले स्वच्छ हुन आग्रह गर्नुभो । एकदम राम्रो कुरा हो । तर स्वच्छ मात्र भएर पुग्दैन । एउटा मुर्ति स्वच्छ भएर बस्छ । भ्रष्टाचार गर्दैन । के त्यतिले पुग्यो त ? स्वच्छ मात्र होइन, सक्रिय पनि हुनुर्पयो ।
धुर्मुस सुन्तलीले रंगशाला बनाउँछन् । अरुले केही नगर्ने ? अरुले रंगशाला नबनाए पनि केही त गरौं । गरे किन हुँदैन ? एउटा मान्छे खोजिरहेछु भन्दा ‘ए धर्मुस सुन्तली भेटियो । अब पुग्यो त ? एउटा रंगशालाले मात्र त पुग्दैन । त्यसैले सबै जुटौं । म सबै साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कमसेकम सबैले धुर्मुस हुनुर्पयो, सुन्तली हुनुर्पयो । हामी हरेकले गर्न सक्छौं ।
प्रश्न आउन सक्छ पैसा छैन, कसरी गर्ने ? मैले भन्ने गर्छु पैसाले विकास हुने होइन । विचार–संकल्पले हुने हो । विकासले पैसा आउँछ । पैसा छ भन्दैमा विकास हुन्छ भन्न सकिँदैन । पैसावालाहरु क्यासिनोमा गएर रित्तिन्छन् । आइडियावालाहरु आइडिया लगाएर विकास गर्छन् र पैसा कमाउँछन् । आइडिया मुख्य कुरा हो ।
चित्रमा देखाएको क्रिकेट रंगशाला बनाउँछु भन्नेहरुको बैंक ब्यालेन्स कति छ ? संकल्प गर्नेहरुको साथमा कति पैसा छ ? खल्तीमा चिया खाने पैसा छ कि छैन ? तर तीन अर्बको रंगशाला बनाउँछु भनेको छ । कत्रो विश्वास । फुटिकौडी साथमा नभएको मान्छेले रंगशाला बनाउँछु भन्यो । लगत्तै अर्कोले छेउबाट चिर्कटो लेखेर दियो, म तीन करोड दिन्छु । तँ आँट म र्पुयाउँछु भनेको यही हो । एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्यौं भने देश बनाउन सक्छौं ।
केही वर्षभित्र नेपाल नामको देशको पहिचान, परिचय परिवर्तन हुन्छ । यति सानो देशलाई केही वर्षभित्रै चिटिक्क पार्न सकिन्छ । अलिकति समय लाग्छ । रिंगरोडको बाटो बनाउँदा अलिकति धुलो उड्छ फेरि । धुलो उड्यो भनेर गाली आउँछ । बनाइसकेपछि गाली खाइँदैन । मेलम्चीको पानीमा अलिकति कचपच भएको छ ठेकेदार भागेर । वार्ता गर्न आउँदैछ । भोलि, पर्सि थाइल्यान्डमा कुरा हुन्छ । उसले बनाउला–नबनाउला तर, हामी बनाउँछौं । पानी ल्याउँदा फेरि अलिकति थोत्रा पाइप कचपच हुन्छन् । त्यो मिलाउँछौं । निर्माण कार्यको समयमा अलिकति असुविधा हुन्छ । त्यसपछि असुविधाको अन्त्य गर्छौं ।
अब राजनीतकि शक्तिहरुबीच सहमति कायम गर्ने, पारस्परिक विश्वासको वातावरण बनाउने र अगाडि बढ्ने हो । असमझदारी भयो भने कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने एउटा नमूना सुनाउँछु । जीपी कोइराला स्वासप्रश्वास केन्द्र तनहुँमा बनाउने भन्ने कुरा छ । मैले कसरी बनाउने भनेर नेपाली कांग्रेससँग कुराकानी गरौं भनेँ । शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजीलाई भनेँ ।
यत्तिकै जीपी कोइरालाको नाममा बनाउने भनेको धेरै वर्ष भयो, पाइलो सरेको छैन । कसरी राम्रो बनाउने छलफल गरौं भनेको हुँ । म त राम्रै कुरा हुन्छ भनेको त संसदमा अवरोध पो भयो । साथीहरुले मलाई सोध्नुभयो, यथास्थितिमा राख्ने कि नराख्ने ? मैले भने यथास्थितिमा राख्ने भए त राखिहाल्थेँ, राम्रो बनाउने हो । साथीहरुले होइन, पाइँदैन, यथास्थितिमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो । जहाँ केही छैन त्यसलाई यथास्थितिमा राखेर गर्ने के ? म अगाडि बढाउँ भन्छु, उहाँहरु यथास्थितिमा राखौं भन्नुहुन्छ । असमझदारी हुँदोहेछ ।
हामीलाई हस्पिटल, कलेज, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, तालिम केन्द्र चाहिएको छ । अनि हामीलाई पूर्वाधारहरुको विकास चाहिएको छ, जसबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौं । जनशक्ति बाहिर नजाओस् ।
गाउँमा पानीको धारा छैन, यता बजेट फ्रिज हुन्छ
मानव सेवा आश्रमलाई निलगिरी सहकारीको नगद सहयोग